Ihichapụ / undelete Files
1 Hichapụ Files
1.1 Nhichapụ nchọgharị / search akụkọ ihe mere eme
1.2 Hichapụ Kuki
1.3 Hichapụ égwu
1.4 Hichapụ Downloads
1.5 ihichapụ kpam kpam faịlụ
1.6 Secure ihichapụ
1.7 kwutọrọ Files
1.8 Hichapụ faịlụ iwu
1.10 Hichapụ Google Chrome
1.11 Nhichapụ nchekwa
1,12 Nhichapụ oyiri faịlụ
1,13 Force ihichapụ faịlụ Iji
1,14 Nhichapụ Doctor
1,15 Nhichapụ ochie faịlụ
1,16 Nhichapụ rụrụ arụ faịlụ
1,17 Nhichapụ ekpochi faịlụ
1,18 Nhichapụ undeletable faịlụ
1,19 Nhichapụ Ost. faịlụ
1.20 Nhichapụ YouTube ọwa / videos
1,21 Nhichapụ junk faịlụ
1,22 Nhichapụ malware na virus
1,23 Nhichapụ junk faịlụ
1,24 Nhichapụ Windows update faịlụ
1.25 Nhichapụ ahịhịa
1,26 nwere ike ghara ihichapụ Error
2.1 Naghachi ehichapụ faịlụ
2.2 undelete ngwá ọrụ
Ma gụọ 2.3 undelete Plus Alternatives
2.4 undelete 360 ​​uzo ozo
2.5 NTFS undelete uzo ozo
2.7 weghachite ehichapụ ozi ịntanetị
2.8 Naghachi ehichapụ foto site na iPhone
2.9 Naghachi ehichapụ faịlụ site SD kaadị
2,10 Naghachi ehichapụ faịlụ site Android
2,11 Naghachi ehichapụ photos
2.12 Naghachi ehichapụ faịlụ site egweri biini
2,13 Naghachi ehichapụ ozi ederede
2,14 Naghachi ehichapụ faịlụ site na eriri
2,15 Naghachi ehichapụ nkebi
2,16 Naghachi Dropbox ehichapụ faịlụ
2,17 EaseUs ehichapụ faịlụ Iweghachite uzo ozo
2,18 Naghachi ehichapụ video
2,19 Naghachi nnofega ehichapụ faịlụ
2,20 Wepu mberede ihichapụ
2,21 weghachite ehichapụ kọntaktị
2,23 Naghachi ehichapụ nchekwa
2,24 Naghachi ehichapụ faịlụ site na pen mbanye
2,25 weghachite ehichapụ SMS
2,26 weghachite ehichapụ Notes
2,27 Android égwu naghachi ehichapụ faịlụ
2,28 Naghachi ehichapụ Okwu Documents
2,29 System weghachi ehichapụ faịlụ
E nwere ọtụtụ ọnọdụ mgbe ị ihichapụ na otu faịlụ ma doo anya na 'egweri biini' na mgbe ahụ-aghọta na ị ka chọrọ ya. N'ọnọdụ dị otú ahụ, ma mkpa ka i nwere a azụ - elu nke faịlụ ma ọ bụ a data mgbake software na ike mfe naghachi gị ehichapụ faịlụ. Ụfọdụ software-abịa na nhọrọ nke reconstructing furu efu faịlụ na nchekwa na ọtụtụ software nwekwara ike naghachi furu efu faịlụ site na gị mpụga draịva na ngwaọrụ.
Undelete 360 ​​bụ nnọọ ewu ewu aha n'etiti mgbe software ọrụ karịsịa maka ndị na-ugboro ugboro achọ data mgbake ngwaọrụ. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị bụghị a mgbe onye ọrụ ndị dị otú ahụ software ma i nwere ike n'ezie chere ihu ọtụtụ ọnọdụ mgbe ị nwere ike mmadụ na mberede ehichapụ ụfọdụ dị mkpa faịlụ site na kọmputa gị. Ọ bụ nnọọ na-akụda mmụọ na-ezute ndị dị otú ahụ na mgbe ahụ humongous ọrụ nke ndokwa data ọzọ. N'ọnọdụ dị otú ahụ, data mgbake ngwá ọrụ dị ka undelete 360 ​​na-abịa enyemaka.
Nke a software e mere na a dị iche iche ụdị algọridim na rụọ ọrụ nke ọma na-enyocha na Recovers furu efu faịlụ na kọmputa gị. Ọ nwere ike na-arụ ọrụ na faịlụ yana nchekwa na anọwo na-ehichapụ mmadụ na mberede, site nje ma ọ bụ software / usoro ọdịda. Ọ bụghị naanị irè na kọmputa gị ma na-arụ ọrụ na USB draịva, igwefoto ngwaọrụ, pen draịva na ebe nchekwa kaadị. A nile na-eme ka undelete 360 ​​a nnọọ viable data mgbake ngwá ọrụ maka ọrụ.
Ma catch bụ na ọ bụ adịghị maka nnukwu ọnụ ọgụgụ nke Mac OS X ọrụ dị ka ọ bụ dakọtara na ya. N'ihi ya, undelete 360 ​​na-arụ ọrụ nanị maka Windows. Ma, e nwere nhọrọ dịgasị iche iche na anyị na-achọgharị, họrọ na shortlisted maka Mac OS X ọrụ. Ndị a software na-eje ozi n'otu nzube na-enye mfe na oru oma data mgbake. Ụfọdụ n'ime ha na-abịa na otu atụmatụ mgbe ụfọdụ egwuregwu ọbụna mma atụmatụ na accessibility nhọrọ. Ka nwere anya na n'elu 5 uzo ozo ka undelete 360 ​​-
1.Wondershare Data Recovery Ngwá Ọrụ
Wondershare Data Recovery Ngwá Ọrụ maka Mac bụ nnọọ mfe ngwá ọrụ iji Isi Iyi azụ gị niile mmadụ na mberede furu efu faịlụ dị ka oyiyi, akwụkwọ, videos, ozi ịntanetị na ọbụna archived faịlụ. Ọ nwere ike na naghachi faịlụ furu efu ruru na-ezighị ezi na ime ihe, mberede nhichapụ na virus ọrịa.
Omenala Ahụmahụ - Ị nwere nhọrọ ma na-eji software site ya Ọkachamara ma ọ bụ site Manual Data Recovery nhọrọ.
Help Njirimara - The enyemaka atụmatụ na-eso nke a na omume na-ezo n'ime a dobe ala menu na bụ inweta site a obere akara ngosi na elu aka nri akuku nke ihuenyo.
2. Disk akuakuzinwo
Disk akuakuzinwo-enyere gị aka naghachi furu efu faịlụ, oyiyi na akwụkwọ na gị usoro nakwa dị ka mpụga USB draịva. Ụfọdụ nke faịlụ na-adịghị recoverable ma Disk akuakuzinwo agba mbọ na-re-mara ha ma ọ bụ ikwu ụzọ ha na ọtụtụ ikpe ọ bụ ihe ịga nke ọma.
Jikọọ na ike iṅomi - N'adịghị ka ọtụtụ software, Disk akuakuzinwo nwekwara ike iṅomi ma naghachi furu efu faịlụ site na ngwaọrụ ọ bụla na i nwere ike jikọọ na gị usoro.
Ṅaa - The isi ruo software bụ na ọ pụrụ iṅomi furu efu faịlụ maka free ma naghachi ha mkpa ka ị na-azụta a ikike.
3. stellar Phoenix Mac Data Recovery
Stellar Phoenix Mac Data Recovery bụ ọkachamara ngwá ọrụ iji undelete furu efu faịlụ site na gị usoro. Ọ na-enyere na-agbake faịlụ na i kpaliri site gị ahịhịa na enweghị oke.
Preview - Nke a software na-enye gị ihe atụ nke natara rụrụ arụ faịlụ kama kpọmkwem reloading ha na gị na usoro.
Lezienụ Option - Ị pụrụ nanị na-a Gụọ - na oyiri nke software na-enye atụ nke natara faịlụ. Iji nweta na-arụ ọrụ version, i kwesịrị azụ software.
EaseUs Data Recovery software nwere ike mfe naghachi ehichapụ faịlụ na e ma ehichapụ ozugbo ma ọ bụ bupụrụ si egweri biini. The software nwere ike naputa faịlụ na nchekwa si gị usoro (esịtidem mbanye) na kwa si mpụta draịva na ejikọta ngwaọrụ.
Free Trial - The free ikpe na software na-enye bụ oké ụzọ mata ma ọ bụrụ na software bụ ihe ị na-achọ ma ọ bụ. Ị nwere ike ịnweta fọrọ nke nta niile atụmatụ na-ekpe ikpe na ego ya.
Limited Accessibility - Ị pụrụ ịhụ ụfọdụ n'ime atụmatụ a bit mmachi ezie na ọ na-adịghị ukwuu n'ime egbochi mgbake usoro ọ ụfọdụ na-ike.
5. Mac Free ọ bụla Data Recovery
Mac Free ọ bụla Data Recovery Ngwá Ọrụ dị irè na-enyere gị naghachi furu efu data. Ị ga-esi 20 Ebe e si nweta na-agbalị na naghachi faịlụ na ị ga-ịzụta ọzọ recoveries mgbe e mesịrị. N'ezie a bụkwa oké ụzọ nwalee software na ego ma ọ bụrụ na ọ ezute gị chọrọ. Ọ nwere ọtụtụ atụmatụ na nwere ike tinye n'ọrụ.
Speed ​​nke Iweghachite - Ị nwere ike n'ezie naghachi furu efu faịlụ n'ime nkeji. Ọ na-enyocha na okụt faịlụ nnọọ ngwa ngwa na naputa ya na-enweghị hassle.
Enweghị Help - Ọ bụ ezie na interface nke software dị nnukwu ọcha na ọrụ enyi na enyi, e nweghị enyemaka ma ọ bụ nkwado ngalaba n'ihi na ị na ịnweta ma ọ bụrụ na ị na-enwe nsogbu ọ bụla ma ọ bụ na-achọ ndị ọzọ aka. Ị ga-mkpa ịdabere na online nkwado.
E nwere dị iche ịtụnanya data mgbake software na ngwá ọrụ na i nwere ike iji na-agbake gị furu efu faịlụ, nchekwa, onyonyo, na vidiyo. Ọbụna ụfọdụ enyere gị aka naghachi faịlụ site na ihe ọ bụla ọzọ na ngwaọrụ na ị nwere ike jikọọ gị Mac. Ọtụtụ n'ime ndị a software nye a free version ma ọ bụ ikpe mgbe ụfọdụ n'ime ha nwere nkwụnye nsụgharị naanị na ike zụrụ ma nwee mmasị. Ya mere, oge ọzọ ị hapụ a faịlụ ruru ka ihe ọ bụla, echegbula. Dị na-eji a data mgbake software.
5 Ụzọ naghachi ehichapụ Okwu akwụkwọ na ike ịbụ Zọpụta Ọrụ Gị
Olee otú naghachi nnofega ehichapụ faịlụ
Movica-adịghị arụ ọrụ? Nweta Best Movica Alternative
Bender Ntụgharị Alternative: A Faster All-na-otu Video Ntụgharị
A ngwa ngwa na elu ndị ọzọ Turbo.264 Alternative
Ọ bụla-atụ aro Boilsoft Alternative?
> Resource> Alternatives> The kasị mma 10 uzo ozo maka undelete Plus na Windows na Mac OS X